MANCHESTER CITY Oo Si Taariikhi Ah 44 Sanno Ka Dib Ku Guuleysatay Horyaalka Premier League. - iftineducation.com
aadan21 / May 13, 2012
iftineducation.com – Manchester City ayaa noqotay horyaalka Ingariiska markii ugu horeysay tan iyo 1968dii iyagoo 5 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray kaga badiyay 3-1 QPR oo marti ku aheyd Etihad Stadium.
Edin Dzeko ayaa barbareeyay ciyaarta daqiiqadii labaad ee waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ka hor inta uusan Sergio Aguero dhalinin goolkii horyaalka gacanta u geliyay Manchester daqiiqadii 4aad ee dheeriga aheyd.
Labada kooxood ayaa ku dhameystay min 89 dhibcood lakiin kooxda Roberto Mancini ayaa sideed gool waxa ay dheer yihiin kooxda Sir Alex Ferguson kuwasoo 1-0 kaga badiyay Sunderland.
Tartanka horyaalka ee xilli ciyaareedkan ayaa la dhihi karaa waa kii ugu xamaasada badnaa inta la xasuusto tartanka horyaalka Ingariiska, waxaana taageerayaasha City ay farxad darteed soo galeen garoonka markii ay ciyaarta dhamaatay.
Sergio Aguero ayaa noqday halyeey ay kooxda xusi doonto, isagoo shan daqiiqo gudaheed taageerayaasha Manchester City ka siibay waran xanuun badnaa islamarkaana ugu bedelay farxad ay sugayeen 44 sanno.
Manchester City ayaa noqotay kooxdii 5aad ee ku guuleysatay horyaalka Ingariiska tan iyo intii loo bixiyay Premier League 1992kii.
Magaalada Manchester waxaa haatan ku soo duushay oo qabsatay dayaxa baluuga ee City kuwaasoo ugu danbeyn aamusiyay kooxda Sir Alex Ferguson oo muddo badan madax ka aheyd magaalada Manchester.
Waa maalin taariikh u leh City, waana maalin ka sheekeyn u ah taariikhda Premier League iyadoo daqiiqado gudaheed ay isku bedeleen wax walba.
Dhanka kale kooxda QPR ayaa iyadana Etihad Stadium ku dabaaldegtay ka dib markii ay ka badbaadeen inay ka haraan horyaalka Ingariiska inkastoo laga badiyay.
Bolton ayaa ku bedelkeeda u laabatay horyaalka heerka labaad ka dib barbaro 2-2 ah oo ay la galeen kooxda Stoke City, waxaana ay ku biirayaan Blackburn iyo Wolves oo hore u xaqiiqsaday inay ka hareen horyaalka Premier League.
Dhanka kale Arsenal ayaa kaalinta 3aad ee ku dhameysatay islamarkaana si toos ah ugu soo bixi doonta Champions League ka dib markii ay 3-2 ay kaga badiyeen kooxda West Brom.
Tottenham ayaa ku dhameysatay kaalinta 4aad ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen Fulham.